ဗာနူအာ 2009 ၏ဖောင်ဒေးရှင်းအက်ဥပဒေ (လျှော့မှာ "အက်ဥပဒေ") ပြဋ္ဌာန်း။ နှစ်နှစ်အကြာတွင်အတွက်ဖောင်ဒေးရှင်းတွင် 146 ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေအမိန့်အဘယ်သူမျှမ 2011 ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအက်ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများအားလုံးအမြစ်ကို၏တည်ထောင်ခြင်း, စစ်ဆင်ရေး, နှင့်ဖျက်သိမ်းအုပ်ချုပ်။ အဆိုပါဗာနူအာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်အခြေခံအုတ်မြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းညှိသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုယျခန်ဓာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေအိမ်ခြံမြေ (ပိုင်ဆိုင်မှု) တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တည်ထောင်သူများကလွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity အဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းသတ်မှတ်ပါတယ်။ ရိုးအမြစ်ကိုပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူအကျိုးအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဗာနူအာသြစတြေးလျနှင့်ဖီဂျီအနီး 80 ကျွန်းများပါဝင်သည်။ ပြင်သစ်နှင့်ဗြိတိသျှနှစ်ဦးစလုံးသည်၎င်း၏သုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာစကားများနှစ်ခုဖြစ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးဘာသာစကားများရရှိလာတဲ့ဗာနူအာကိုလိုနီ။ ဗာနူအာ 1980 အတွက်အပြည့်အဝလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပါဝင်: နိုင်ငံခြားသားများအားလုံးဗာနူအာ၏အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိရိုးအမြစ်ပါလိမ့်မယ်တိုင်းအကျိုးခံစားခွင့်ဟာနိုင်ငံခြားသားတွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတည်ထောင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
•အဘယ်သူမျှမအခွန်: ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်စုံတစ်ရာမျိုးမျှမအခွန်အခများပေးဆောင်။ မှတ်ချက်: ကမ္ဘာကြီးဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
•ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: နိုင်ငံခြားရေးဥပဒေများဗာနူအာရိုးအမြစ်ကို invalidate သို့မဟုတ်ပယ်လို့မရပါဘူး။
ရိုးအမြစ်ကိုအတိအကျရောနှောသို့မဟုတ်ဗာနူအာအတွက်အခြားဥပဒေရေးရာ entity ၏နာမကိုသိပ်အလားတူနာမည်တစ်ခုကို select မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နာမညျကိုယင်း၏အဆုံးမှာစကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ပါဝင်ရမည်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. က၎င်း၏ကောင်စီဝင်၏ resolution ကိုအားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
တည်ထောင်သူကိုယ်စားသရုပ်ဆောင်လျှောက်ထားသည့်ဗာနူအာဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများကော်မရှင် (လျှော့က "ကော်မရှင်") နှင့်အတူဖောင်ဒေးရှင်းပဋိညာဉ်စာတမ်းက register လုပ်သွား။ တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်မဆိုအပျသညျဟုရည်ရွယ်ချက်ထူထောင်နိုင်ပါသည်။
• Foundation ၏အတွင်းရေးမှူးရဲ့အမည်နှင့်လိပ်စာ;
• Foundation ၏ဒေသခံမှတ်ပုံတင်လိပ်စာ;
•လိုအပ်သော application ကိုအခကြေးငွေပေးဆောင်။
ထို့အပြင်အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့် / သို့မဟုတ်ယင်း၏တည်ထောင်သူကိုယ်စားသရုပ်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး CTSP လိုင်စင်အပိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ခွင့်ပြုချက်အပေါ်မှာ၎င်း, ကော်မရှင်တရားစွဲဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်နာမတော်၌တရားစွဲခံရနိုင်ပါသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity အဖြစ်အခြေခံအုတ်မြစ်တည်စေရာတည်ထောင်နှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏လက်မှတ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့အမည်, ယင်း၏တာဝန်ပေးအပ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲဆံ့မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထည့်သွင်းအဖြစ်ကောက်ချက်ချအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းကိုအခြားသူများများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုသုံးစွဲဖို့လိုလားလျှင်, ငါတို့သည်သင်တစ်ဦးရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည် ဘဏ္ဍာရေးလိုင်စင်.
အဆိုပါကော်မရှင်အပလီကေး၏အထက်ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက််ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုမှတ်ပုံတင်မည်ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်။ ဒါဟာအများပြည်သူအားဖြင့်သုံးစွဲနိုင်မယ့်အများပြည်သူစံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကော်မရှင်နှင့်အတူတင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများထိုကဲ့သို့သော Foundation ၏ပဋိညာဉ်စာတမ်းအဖြစ်အများပြည်သူကိုမရရှိနိုင်ကြသည်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေတစ်ဦးတည်ထောင်သူတစ်ဦးကသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တိုက်မြစ်ကိုထူထောင်နေတဲ့စင်းလုံးငှား ပေး. စီရင်သူတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းခန္ဓာကိုယ်ကြောင်းသတ်မှတ်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများ (ပိုင်ဆိုင်မှု) ဘယ်သို့ (အမြဲတမ်းအတွက်) အခြေခံအုတ်မြစ်လွှဲပြောင်းဖြစ်ကြသည်။ တည်ထောင်သူတစ်ဦးထက်ပိုလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
ရိုးအမြစ်သည်၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များမှမည်သည့်ဖွစျပှားလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးဆက်ဆံ, စနစ်တကျပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအပါအဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သောသည်အဘယ်အရာလုပ်ဖို့ပါဝါရှိသည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စစ်ဆင်ရေးသာလြှငျအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နှင့်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြန့်ဝေရန်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြင့်စေ့စပ်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကအခြေခံအုတ်မြစ်သည်အဘယ်သူ၏အဖွဲ့ဝင် "ကောင်စီဝင်" ဟုခေါ်ကြသည်ကောင်စီဝင်တစ်ဘုတ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကကောင်စီဝင်တစ်ဦးကသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကောင်စီဝင်မဆိုတိုင်းပြည်အတွင်းနေထိုင်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ, လျော်ကြေးပေးအပ်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကောင်စီဝင်ခန့်အပ်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထွက်သတ်မှတ်။
ကောင်စီဝင်အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တာဝန်ကြွေးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သမ္မာသတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းအနေဖြင့်ရိုးရိုးသားသားနှင့်ကောင်းမွန်သောယုံကြည်ခြင်း၌ပြုမူဆောင်ရွက်ရပေမည်။ ယင်းအက်ဥပဒေသို့မဟုတ်အခြားဗာနူအာဥပဒေများသို့မဟုတ်ဒေသခံတစ်ဦးတရားရုံးအမိန့်ဖြင့်လိုအပ်သောမဟုတ်လျှင်အပြင်, ကောင်စီဝင်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်မပြုရပါ။
တိုက်မြစ်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မည်သူမဆိုအဆိုပါကောင်စီဝင်သူတို့၏ကိုယ်စားပြုမူရန်၎င်း၏စာချုပ်တာဝန်ဝတ္တရားသို့မဟုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအခြားသူများမှအခြေခံအုတ်မြစ် binding တန်ခိုးရှိသည်ယူဆနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းကပဋိညာဉ်စာတမ်းဟာကောင်စီဝင်များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပျေါမှာမဆိုန့်အသတ်ထွက်သတ်မှတ်။ တန်ခိုး၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်နေသောကောင်စီဝင်များကခေါ်ဆောင်သွားမဆိုလုပ်ရပ်များသာအုပ်ထိန်းသူသို့မဟုတ်တည်ထောင်သူ၏ resolution ကိုတို့ကအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်အတွင်းရေးမှူးကိုခနျ့အပျရမယျ။ အတွင်းရေးမှူးကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးကတစ်ဦးတည်းသောကောင်စီဝင်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းမရနိုင်ပါ။
အတွင်းရေးမှူး s ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများတွင်ထွက်သတ်မှတ်ထားသည့်အခြားတာဝန်များစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်။
တိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်တခုအုပ်ထိန်းသူကိုခနျ့အပျရမယျ။ ပထမဦးဆုံးအအုပ်ထိန်းသူကိုတည်ထောင်သူကခန့်အပ်ခြင်းနှင့်လည်းအသစ်တစ်ခုကိုအုပ်ထိန်းသူများ၏လျော်ကြေး, ဖယ်ရှားရေးနှင့်ချိန်းအသေးစိတ်သောပဋိညာဉ်စာတမ်းထဲမှာဖော်ထုတ်နေသည်။ တစ်ဦးကတစ်ဦးတည်းသောကောင်စီဝင်တစ်ဦးအုပ်ထိန်းသူအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူသူသို့မဟုတ်သူမ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောအားလုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အုပ်ထိန်းသူများအပြည့်အဝအားလုံးစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်, စာအုပ်တွေနဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။
ရိုးအမြစ်ကိုသေးငယ်တဲ့တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မှလွဲ. အခွန်မဆိုအမျိုးအစားမှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ သို့သော်သူတို့ကကော်မရှင်နှင့်အတူနှစ်စဉ်ပြန်လာ file ရမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရင်းမြစ်ထားတဲ့ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်မည်သူမဆိုအဖြစ်၎င်းတို့၏ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်သူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
ရိုးအမြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာလျော်သောစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်, Moni expensed နှင့်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများနှင့်အတူအဘယျသို့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြန့်ဝေ, ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် liabilities အားဖြင့်အားလုံးဝယ်ယူမှုနှင့်အရောင်းစာအုပ်များနှင့်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများတှငျမှတျတမျးတငျထားရပါမည်။
တခြားနိုင်ငံတွေသို့မဟုတ်တရားစီရင်မှုကသူတို့ဥပဒေများနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပျက်ပြယ်သို့မဟုတ် voidable သို့မဟုတ်တရားဝင်ချွတ်ယွင်းဖြစ်ဗာနူအာဥပဒေများအောက်တွင်တရားဝင်ဖြစ်သောအခြေခံအုတ်မြစ်မှဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုဖောင်ဒေးရှင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းမည်သည့်လုပ်ရပ်ကြေညာလို့မရပါဘူး။
နိုင်ငံခြားဥပဒေများပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်သို့မဟုတ်ရြှုံးများ၏တရားဝင်မှုတိုင်ကြားချက်ကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်, တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းသူမည်သူမဆို၏စွမ်းရည်တစ်ဦးအကျိုးခံစားခွင့်များမရသည့်အခွင့်အရေးများတာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းကိုသာတစ်ဦးအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခံရဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်မေးခွန်းထုတ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသို့မဟုတ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမွေဥစ္စာအခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်တည်ထောင်သူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးအခြားသူတစ်ဦးအပေါ်နိုင်ငံခြားပညတ်တရားအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်။
ရိုးအမြစ်ကိုအစိုးရနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ကော်ပီ file ရမယ်နေစဉ်, တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသာအခြေခံအချက်အလက်များကိုအများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ အဆိုပါပဋိညာဉ်စာတမ်းပြည်သူ့စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်မရရှိနိုင်။
တစ်ဦးကဗာနူအာပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကနိုင်ငံခြားသားတွေဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း: စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားသင်တန်းသားများ, privacy ကို, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အုပ်ထိန်းသူမရှိ, အခွန်, နှင့်အင်္ဂလိပ်င်း၏သုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။